Herinaratra Toamasina: hisy ambim-bava hiatrehana fotoam-piotazana letisia | NewsMada
Tapaka ny herinaratra eto Toamasina, nanomboka ny 26 jona no ho ny mankaty. Manoloana izany, nilaza ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Andriamanampisoa Solo, ny zoma 11 septambra teo, fa ho tapitra ny delestazy eto Toamasina, satria vita daholo ny fanarenana ireo milina simba tao amin’ny toby famokarana any Betainomby sy ny an’ny orinasa Enelec, mpamatsy herinaratra ny Jirama. Ho ampy ny herinaratra eto Toamasina ary hisy ambim-bava ka ho ampy hiatrehana ny fotoam-piotazana letisia.
Hitombo hatrany amin’ny 37 MW
Nilaza ny talem-paritra Jirama, i Toto Jean de Dieu, fa tsy nisy afa-tsy 17,5 MW ny tanjaky ny herinaratra teto Toamasina, nanomboka ny 26 jona teo. Tafakatra 27 MW izany, ankehitriny, taorian’ny nanamboaran’ny teknisianina vahiny Tiorka ireo milina simba. Nanamafy ny PCA Jirama fa hitombo hatrany amin’ny 35-37 MW izany hatramin’ny faran’ny taona, fotoana hisian’ny taom-piotazana letisia. Manampy ireo, nambarany fa manodidina ny 30.000 hatramin’ny 50.000 ny mpanjifa vaovao hampidirana herinjiro mialoha ny faran’ny taona eto Madagasikara.
Tapaka ny jiro ny alatsinainy sy talata
Etsy an-kilany anefa, tsy tena foana ny delestazy eto Toamasina.Tapaka ny jiro tany amin’ny fokontany maro, ny alatsinainy teo, nanomboka tamin’ny 4 ora tolakandro hatramin’ny 8 ora alina. Nitohy tany amin’ny fokontany vitsivitsy izany ny ampitso talata.
Nahazo fitaovana fanamboarana « transformateur » ny Jirama. Eny amin’ny ozinina eny Analamahitsy Antanetibe no misy azy. Manampy ireo koa ny kamiao manokana “camion à grue” maherin’ny 20, hanampy ny fitaterana sady fametrahana ny andrin-jiro.
Nitsidika teny an-toerana ny tale jeneralin’ny Jirama, omaly ary nambarany fa hanafaingana ny fampidiran-jiro miisa 12.000, kasaina ho vitaina mialoha ny faran’ny taona 2020 ny fahazoana ireo fitaovana ireo. Hanatsarana ny famatsiana herinaratra amin’ireo faritra mena, ao anatin’ilay tetikasa Herinandro iray mira tanàna iray ihany koa.